GEA Ukuqeqeshwa | Ecobricks.org
Funda kusuka ku-Master Trash Transformers
Ukuqeqeshwa kwe-Ecobrick Kudizayinelwe Ukugqugquzela Nokunika Imiphakathi ukuthi ithathe ipulasitiki yabo
Thola umphakathi wakho, ibhizinisi noma inhlangano ngokusuka kwe-zero ngokugcwele nge-Ecobricks
Izethulo ezijwayelekile ze-Ecobrick
Funda isayensi eyisisekelo nemigomo ye-écobricking kanye namasu abalulekile okupakisha kanye nokwenza imodemu. Thola isitifiketi se-GEA Trainer
Ama-workshops e-Ecobrick ekuqaleni
Lezi ziboniso zehora ezintathu kuya kwezine zihlanganisa zonke izisekelo. Abaqeqeshi bethu bazoletha izingozi zepulasitiki, indlela yokwenza i-ecobrick, ukuhlinzeka ngeseshini yokufaka i-packing kanye nokwenza imodemu.
I-GEA ToT yethu izohlomisa abasebenzi bakho ukuba baphume baqeqeshe abanye ku-Ecobrick. Kuhle kakhulu emadolobheni, omasipala kanye namabhodi esikoleni abafuna ukuthola impande yenkinga yabo yepulasitiki. Idolobha lethu lokugcina laphuma kuma-ecobrickers angu-20 kuya ku-20 000 ezinyangeni ezintathu.
Abaqeqeshi be-GEA baqinisekisiwe futhi balungele ukwakha umhlaba wonke omusha.
I-Ecobricking yi-tech-tech, ezobuchwepheshe bezenhlalo ezingakwazi ukusabalalisa njengomlilo wasendle. Kungakapheli izinyanga, i-workshop enabantu abangu-20 ingasakazeka ukuze ifinyelele izinkulungwane.
Inethiwekhi yethu yabaqeqeshi be-ecobrick eqinisekisiwe iseduze ukukusiza wena nomphakathi wakho, isikole, ibhizinisi, idolobha noma inhlangano uqalise ukucubungula. Sinezichwepheshe ezifundeni ezihlukene nakwezinye izinto ezihlukile. Ukusuka epaketheni yepulasitiki, ukwakha imodemu, ukwakha ibhodlela – ukuhlanganisa amadolobha onke, amabhodi esikoleni, nezinhlangano zenkolo ukuze zilahlekelwe yilapho-sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza ukuthi uqalise.
Ama-workshops ethu kanye nezinto zethu zokuqeqesha zenzelwe ukukhulisa izinto eziphilayo kuqala, futhi zifundise okwesibili. Esihlangenweni sethu, ukuqonda ukuthi kungani i-ecobricking ibalulekile kubaluleke nakakhulu kunokwazi ukuthi yi-ecobrick noma kanjani yokwakha. Le mbewu ihamba ngokuguquguquka okujulile nesikhathi eside. Ungathola kusayithi lethu, zonke izinto zethu zokuqeqesha. Ngena ngqo ekuzifundeni wena, futhi uma usulungele, uzothola konke okudingayo lapha ukuze uholele ama-workshops akho.
Funda kusuka ochwepheshe bethu
Yiqiniso, akukho okufana nokufunda kusuka kumuntu omdala! I-Global Ecobrick Alliance yethu ineamalungu futhi iqinisekisile i-GEA Trainers emhlabeni jikelele. Baseduze ukusiza abanye ngenjabulo ukuxazulula inkinga yabo yepulasitiki. Ungasebenzisa imephu yethu esebenzayo ukuze uthole futhi uxhumane nabaqeqeshi eduze kwakho. Abaqeqeshi bethu banikeza izinhlobo ezintathu zokusebenzela. Ungabuyekeza amadokhumenti alandelayo ukuze unqume ukuthi yikuphi okuhambisana nezidingo zakho, okudingayo ukulungiselela, kanye nokulindela kwabaqeqeshi.
Lungisa iPulasitiki emphakathini wakho nge-workshop yosuku olulodwa ehlanganisa isayensi nemigomo eyisisekelo ye-ecobricking. Funda amasu abalulekile wokupakisha kwe-ecobrick nesakhiwo. Sonke sizokwenza ilogi i-ecobrick bese sakha imodemu yefenisha.
(PDF 500k): isiNgisi / isi-Indonesian
Izindleko: $ 75 + izindleko zokuhamba zabaqeqeshi ababili be-GEA
Ukubonisana kwe-Ecobrick ku-intanethi
Bheka i-GEA ecobriker ye-veteran phezu kwe-Skype. Thola isiqondiso kunoma yikuphi amasu e-ecobricking, ekwakheni ibhodlela, kumishini yomphakathi yokusabalalisa i-ecobricks ngendlela yokubamba ukunyakaza kwegciwane. Thintana nathi ukugcina isikhathi usebenzisa ifomu elingezansi. 50 US $ / hr nge-paypal. Itholakala ngesiFulentshi, isi-Indonesian, isiNgisi, nesipanishi.
I-PDF iyatholakala ngesicelo
Izindleko: $ 50 USD
I-Ecobrick course train trainer
Lezi zinkulumo zenzelwe izinkulumo zezifundo noma izethulo zomphakathi kubenzi bezinqumo mayelana nesimo se-écobricks. Azikho izandla ekusebenzeni okubandakanyekayo. Ngokuvamile lezi zethulo ziyisandulela esihle ku-Starter Workshops noma ku-ToT ngosuku olulandelayo.
Landa: I-English PDF (2.1MB) Izindleko ezingu- $ 200 USD
Uhlelo lwe-Ecobrick Training Training
Sungula iPulasitiki Esifundeni Sakho ngokusebenzisa Ukuxhobisa Komphakathi kanye Nokuphakanyiswa Kwezinto Eziphilayo. Lolu suku olulandelayo, uhlelo olujulile lwabo abaqeqeshi abangu-30-50 luzokhipha ukusakazwa kwegciwane lokuguqulwa kwedoti kwinethiwekhi yakho nesifunda. Abahlanganyeli bathola isitifiketi se-GEA futhi bahlomele ngokuphelele ukusabalalisa i-ecobricks ngenethiwekhi yakho.
(PDF 5MB): isiNgisi Indleko yePakethe ye-Indonesia: i-IDR engu-2,500,000 Izindleko zephakheji lamazwe ngamazwe: 3500 $ USD
Ukwakhiwa kohlelo lokuqeqesha umhlaba kanye no-Ecobrick
Usuku lwesihlanu, igumbi lokufundela kanye nesandla-ohlelweni oluzoqeqesha abasebenzi abangu-20-30 emigomeni namasu we-Ecobrick Earth Building. Ngengamele i-GEA Earth Builder ye-veteran, le worksho izobona ukuklama, ukuqala nokuqedela iphrojekthi yendawo yokwakha ye-ecobrick ye-green space yenhlangano yakho. Lapho sekuqedile uhlelo, abahlanganyeli bayoba yi-GEA eqinisekisiwe yokuhola i-Earth & Ecobrick ukwakha kanye nama-workshop ngokwabo. (PDF 12MB): isiNgisi
Sicela usebenzise ifomu lethu le-paypal ngezansi ukukhokha izikhathi zokuqeqesha:
Ecobrick Online Consultation .00 USDGEA Online Trainer Program 5.00 USDTraining of Trainer Program [,500.00 USD
Xhumana nathi mayelana nokuqeqesha
Sebenzisa imephu yethu esebenzayo ukuze uthole abalingani bakho be-ecobrick nabaqeqeshi be-ecobrick eduze kwakho, noma uxhumane nathi ngokuqondile usebenzisa ifomu kuleli khasi.
Umqeqeshi ophumelelayo wabahlanganyeli abaqeqeshwayo banikezwa isitifiketi se-GEA Trainer. Bavela emhlanganweni wezinsuku ezingu-2-3 ukulungele ukuqeqesha abanye indlela yokwenza i-ecobrick futhi bahole izifundo zabo.
Izithombe ezivela ku-Ecobrick Trainings
Imephu yomqeqeshi we-GEA